News – PPRD
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၊ နေပြည်တော်၏ လမ်းညွှန်မှုအရ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၏ အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှု၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ ဦးဆောင်၍ ပဲခူးမြို့၊ ရွှေသာလျောင်းဘုရားလမ်းရှိ တရားမဝင် ဘတ္ထရီပန့် လိုင်စင်မဲ့ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် ၄ ဆိုင် အား ၁၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရှောင်တခင်စစ်ဆေး၍ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၇ ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ https://www.facebook.com/hashtag/pprd_supriseinspection Cet aspect négatif du crédit personnel peut toutefois être sensiblement réduit si vous comparez les crédits conso avec LesFurets. Accueil Dossiers Dossiers pratiques. Un crédit à la consommation pour acheter son véhicule. online casino Par :…